You are here: Home စစ်ကိုင်း သတင်းများ နိုင်ငံတကာသတင်း
2352013-5	မြောက်ကိုရီးယားအထူးသံတမန်တစ်ဦး တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ
မြောက်ကိုရီးယား-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး အေးစက်နေသည့်ကြားမှ မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအွန်၏ အထူးသံတမန် တစ်ဦး ဖြစ်သူ ချိုရွိုင်ဟေးသည် ပေးကျင်းမြို့သို့ ရောက်ရှိ လာခဲ့ကြောင်း မေ ၂၂ ရက်တွင် ဒေသတွင်း မီဒီယာတစ်ခု၏ ထုတ်ဖော်ပြောကြားချက် အရ သိရသည်။
2352013-4	အိန္ဒိယ၀န်ကြီးချုပ်နှင့် ဆွေးနွေးပွဲတွင် စစ်ဘက် ဆိုင်ရာ အကူအညီများရရှိရေး ဟာမစ် ကာဇိုင်းကြိုးပမ်း
အာဖဂန်နစ္စတန် နိုင်ငံတွင်းမှ နေတိုးတပ်ဖွဲ့များ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်ဆုတ်ခွာပြီးနောက် နိုင်ငံ့လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့များ၏ စွမ်းရည်ကို တိုးမြှင့်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းချက်တစ်ရပ်အနေဖြင့် မေ ၂၁ ရက်ညပိုင်းတွင် အိန္ဒိယ၀န်ကြီးချုပ် မန်မိုဟန်ဆင်းနှင့် နယူးဒေလီမြို့တွင် ပြုလုပ်သည့် ဆွေးနွေးပွဲ၌ နိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေး အတွက် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အကူအညီများရရှိရေးကို အာဖဂန် သမ္မတ ဟာမစ်ကာဇိုင်းက ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း အင်တာနက် သတင်းတစ်ရပ်အရ သိရသည်။
2352013-2	တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင် ကယ်လီဖိုးနီးယား တွင် ကန်သမ္မတ အိုဘားမားနှင့် တွေ့ဆုံမည်
တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်သည် မေ ၃၁ ရက်မှ ဇွန် ၆ ရက်အထိ တရီနီဒက်နှင့် တိုဘားဂိုး၊ ကော်စတာရီကာနှင့် မက္ကဆီကိုနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ပြီး ဆက်လက်၍ ဇွန် ၇ ရက်နှင့် ၈ ရက်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ သွားရောက်၍ သမ္မတ ဘားရက်အိုဘားမားနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး မည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ကွင်ဂန်က ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားခဲ့သည်။
2352013-3	တရုတ်နိုင်ငံ ရှင်ကျန်းကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့် ရဒေသတွင် ကြီးမားသော ရွှေသိုက်ကြီး တစ်ခုအား ရှာဖွေတွေ့ရှိ
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်းရှိ ရှင်ကျန်းယူဂါကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွင် အလွန်ကြီးမားသော ရွှေသိုက်ကြီး တစ်ခုကို ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာ အလုပ်သမားများက ရှာဖွေတွေ့ ရှိခဲ့ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ အရာရှိများက မေ ၂၁ ရက်တွင် ပြောကြားထားသည်။
2352013-1	ဘိုလီးဗီးယားသမ္မတ အီဗို တတိယမြောက် သက်တမ်းယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရ
ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံတွင် လက်ရှိသမ္မတ အီဗိုမိုရာလက်စ်အနေဖြင့် တတိယမြောက်သက်တမ်း အတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရောက်နိုင်ရန် လမ်းခင်းပေးထားသည့် အငြင်းပွား မှုဖြစ်ပေါ်နေသော ဥပဒေ တစ်ရပ်ကို အတည်ပြုသွားခဲ့သည်။ Read more...
Page 1 of 45	«StartPrev12345678910NextEnd»	©2011 by usdp.org.mm. All Right Reserved.